အကောင်းဆုံး NMN အမှုန့် (1094-61-7) ထုတ်လုပ်သူနှင့်စက်ရုံ
Cofttek သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံး NMN အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင် ၂၄၀၀ ကီလိုဂရမ်လစဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ရှိသည်။
NMN အမှုန့် (၁၀၉၄-၆၁-၇) ဗီဒီယို
NMN အမှုန့် Specifications
အမည်: β-Nicotinamide Mononucleotide (NMN) ဆေး၊
မော်လီကျူးအလေးချိန်: 334.2208 g / mol
ပွိုင့်အရည်ပျော်: > 96 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ဓာတုအမည်: ((2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl hydrogen phosphate
နာမ်: Nicotinamide Mononucleotide; NMN; -NMN; β-Nicotinamide mononucleotide
InChI Key ကို: DAYLJWODMCOQEW-TURQNECASA-N ကို
လျှောက်လွှာ: Nicotinamide mononucleotide (NMN) သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု၊ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှင့်ဗီဇဖော်ပြမှုတို့တွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သော NAD + ၏ရှေ့ပြေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်ကျန်းမာရေးနှင့်သက်တမ်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့် B-vitamin niacin မှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
NMN (၁၀၉၄-၆၁-၇) NMR Spectrum
β-Nicotinamide Mononucleotide (NMN) CAS 1094-61-7 ဆိုတာဘာလဲ။
ထို့အပြင် (“ NMN” နှင့်“ β-NMN” ဟုလည်းလူသိများသည့်နီကိုတင်းနိုက် mononucleotide သည် ribose နှင့် nikotinamide မှဆင်းသက်လာသောဘေ့ (Nicotinamide riboside ကဲ့သို့) NMN သည်နီအိုစင်မှဆင်းသက်လာသည်။ လူသားများသည် NMN ကို သုံး၍ နီကိုတင်းနိုက်ဒင်နင်းကူနင်ဒိုင်နူကူနင်ထုတ်ပေးသည်။ NADH) ။ NADH သည် mitochondria၊ sirtuins နှင့် PARP များအတွက်ဖြစ်စဉ်များအတွက် cofactor ဖြစ်သောကြောင့် NMN ကိုတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များတွင် neuroprotective နှင့် anti-aging agent အဖြစ်လေ့လာခဲ့သည်။
β-Nicotinamide Mononucleotide (NMN) CAS 1094-61-7 အကျိုးခံစားခွင့်များ
အိုမင်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောသုတေသနပြုချက်အရအဓိက NAD + အလယ်အလတ်ဖြစ်သော NMN ဖြင့်ဖြည့်စွက်ခြင်းသည်အသက်နှင့်ဆက်စပ်သောဇီဝဖြစ်စဉ်ကျဆင်းမှုကိုလျှော့ချရန်နှင့်အသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများစွာ၏တိုးတက်မှုကိုနှေးကွေးစေရန်ထိရောက်ကြောင်းပြသသည်။ NMN သည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကိုဆယ်လူလာအဆင့်တွင်အကျိုးသက်ရောက်သည်၊ ဂလူးကို့စ်ကိုသည်းခံနိုင်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်၊ ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည်၊ သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်၊ DNA ကိုပြုပြင်ပြီးသိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုအကျိုးပြုသည်။ NMN သည်သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ပုံမှန် neurodegenerative disorders များကိုဆန့်ကျင်။ ကုထုံးဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး အဖြစ်အလားအလာရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ NMN နှင့်ဖြည့်စွက်ခြင်းသည်ခံနိုင်ရည်နှင့်ရွေ့လျားနိုင်မှုကိုထိန်းသိမ်းရာတွင်အကျိုးရှိနိုင်သည်။ ဤကွဲပြားခြားနားသောစနစ်များ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထိန်းသိမ်းခြင်းသည်ကျန်းမာရေးနှင့်အသက်ရှည်ခြင်းကိုတိုးပွားစေပြီးအိုမင်းခြင်းတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှလူနေမှုအဆင့်အတန်းကိုလည်းသိသိသာသာတိုးတက်စေသည်။
β-Nicotinamide Mononucleotide (NMN) CAS 1094-61-7 လှုပ်ရှားမှုယန္တရား?
β-Nicotinamide Mononucleotide (NMN) သည် nikotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) မှတဆင့် nicotinamide မှထုတ်လုပ် NAD + biosynthesis ၏အလယ်အလတ်ဖြစ်ပြီး NMN သို့မဟုတ် nicotinamide ribotide ။ နှလုံးရောဂါစသည်တို့ကဲ့သို့သောအသက်အရွယ် - မှီခိုသောရောဂါများကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့်ရောဂါရှာဖွေခြင်းအတွက်မကြာမီကပြုလုပ်ခဲ့သည့် NMN ၏လေ့လာမှုများတွင်၎င်းသည်အိုမင်းခြင်းကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ဆွေးနွေးမှုတွင်အပူဆုံးဇီဝဗေဒပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်လာသည်။
β-Nicotinamide Mononucleotide (NMN) CAS 1094-61-7 လြှောကျလှာ
β-Nicotinamide Mononucleotide (NMN) သည်ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်ရှိဇီဝြဖစ်ပျက်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ အရိုးကြွက်သား၊ အသည်းလုပ်ဆောင်ချက်၊ အရိုးသိပ်သည်းဆ၊ မျက်စိလည်ပတ်မှု၊ အင်ဆူလင်အာရုံခံနိုင်မှု၊ ကိုယ်ခံစွမ်းအား၊ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နှင့်လှုပ်ရှားမှုအဆင့်များ။
NMN အမှုန့် ရောင်းမည်(β-Nicotinamide Mononucleotide (NMN) အမှုန့်အမြောက်အများကိုအဘယ်မှာဝယ်ယူရမည်နည်း)
ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာပရော်ဖက်ရှင်နယ်β-Nicotinamide Mononucleotide (NMN) အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်ပြီးကုန်ပစ္စည်းများကိုအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သည်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်စားသုံးမှုအတွက်အန္တရာယ်ကင်းကြောင်းသေချာစေရန်တင်းကြပ်ပြီးလွတ်လပ်သောစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Kiss T, Balasubramanian P, Valcarcel-Ares MN, Tarantini S, Yabluchanskiy A, Csipo T, Lipecz A, Reglodi D, Zhang XA, Bari F, Farkas E, Csiszar A, Ungvari Z. နီကိုတင်းနိုက် mononucleotide (NMN) စိတ်ဖိစီးမှုကုသမှုကို attenuates နှင့်အသက် cerebromicrovascular endothelial ဆဲလ်များတွင် angiogenic စွမ်းရည်ကိုကယ်တင်: သွေးကြောသိမြင်မှုချို့ယွင်း၏ကာကွယ်တားဆီးရေးများအတွက်အလားအလာယန္တရား။ Geroscience ။ 2019 မေလ 29 Doi: 10.1007 / s11357-019-00074-2 ။ PubMed PMID: 31144244
Lukacs M, Gilley J, Zhu Y, Orsomando G, Angeletti C, Liu J, Yang X, Park J, Hopkin RJ, Coleman အမတ်များ၊ Zhai RG, Stottmann RW သန္ဓေသား akinesia ပုံပျက်သော sequence ကိုနှင့်အတူနှစ်ခုသန္ဓေသားအတွက် nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase2(NMNAT2) တွင်ပြင်းထန်သော biallelic ဆုံးရှုံးမှု -of function ကိုဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေ။ Exp Neurol ။ 2019 မေလ 25: 112961 ။ Doi: 10.1016 / j.expneurol.2019.112961.PubMed PMID: 31136762 ။
Grozio A, Mills KF, Yoshino J, Bruzzone S, Sociali G, Tokizane K, Lei HC, Cunningham R, Sasaki Y, Migaud ME, Imai SI Slc12a8 သည် nikotinamide mononucleotide Transporter ဖြစ်သည်။ Nat Metab ။ 2019 ဇန်နဝါရီ; 1 (1): 47-57 ။ Doi: 10.1038 / s42255-018-0009-4 ။ Epub 2019 ဇန်နဝါရီ7PubMed PMID: 31131364; PubMed ဗဟို PMCID: PMC6530925 ။